३० महिनाभित्र उपत्यकाकाे विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत बनाउने सम्झाैता
March 21, 2019 खबर खुराकLeaveaComment on ३० महिनाभित्र उपत्यकाकाे विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत बनाउने सम्झाैता
काठमाडौँ, ७ चैत । अव्यवस्थित प्रसारण लाइनका कारण कुरुप बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण प्रणालीलाई आगामी ३० महिनाभित्र भूमिगत गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ ।
विद्युतका पोलका कारण शहरी सौन्दर्य गुमेको तथा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको भन्दै लामो समयदेखि तार भूमिगत गर्ने माग उठ्दै आएको थियो । संसारका कुनै पनि विकसित देशका शहरमा खुलारुपमा विद्युत प्रसारण लाइन देख्न सकिँदैन । विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले विद्युतीय तार भूमिगत गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम गर्न करीब रु. तीन अर्ब ५७ करोड ५१ लाख (कर बाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको हो । यस्तै कम्पनीले रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम करीब रु. तीन अर्ब १२ करोड १५ लाख (कर बाहेक) सम्झौता गरिएको छ ।
मध्य तथा उत्तर काठमाडौँ (महाराजगञ्ज)का आयोजना प्रमुख अधिकारीले निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिँदै सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी जेठदेखि काम शुरु गर्ने लक्ष्य तय गरेको जानकारी दिए । कम्पनीले ठेक्का कार्यान्वयनमा आएको ३० महीनाभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडकखन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजेन्टन डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइने छ । उक्त प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दूरीमा दुई खाल्डा खनेर बीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
भारतबाट नेपालले दुईवटा रेल किन्ने
विप्लवलाई सरकारले भन्यो : हतियार बिसाएपछि मात्र वार्ता हुन्छ
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा काे काे थपिए हेर्नुहाेस नामावलसी सहित
May 20, 2018 न्यूज डेस्क
लिगको ६४ वर्षे इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै मनाङ
लोकसेवा यस कारण सरकारसंग रुष्ट
October 31, 2018 खबर खुराक